तरकारी बारीमा कुहियो, बजारमा अभाव ! - कृषि डेली
Home banner तरकारी बारीमा कुहियो, बजारमा अभाव !
जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेललगायत मुख्य बजारमा तरकारीको अभाव छ तर लकडाउनका कारण ढुवानी रोकिँदा बारीका तरकारी कुहिएर नष्ट हुन थालेका छन् । जिल्लाका कतिपय कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री नभएपछि गाई तथा भैँसीलाई कुँडोको रुपमा पकाएर खुवाउने गरेको पाइएको छ ।
Previous articleअसिना पानीका कारण बागलुङमा २ करोड धेरैको कृषिबाली नष्ट
Next articleनेपालबाट दुबईमा खरबुजा र मेवा निर्यात